eOS - Bilowga wax weyn? | Laga soo bilaabo Linux
Barafka Barafka | | Qaybinta
Qeybinta ku saleysan Ubuntu, xiddig leh iftiinkeeda ayaa dhashay. Nidaamkanna waxyaabo badan ayaa loo qabanayaa.
1 Elementary OS, waa xanta kaliya
2 9 bilood oo leh OS luna hoose
3 Aseptic, Minimalist, miiska had iyo jeer u muuqda mid wanaagsan
4 Naqshadeynta isdhexgalka iyo khibrada isticmaale
5 Xulashada dalabka asalka ah
Elementary OS, waa xanta kaliya
Xitaa ka hor intaan qof ka hadlin Dayaxa ama Jupiter, waxaa jiray koox shaqo oo fulisay astaamo dhowr ah oo lahaa koox badan oo raacayaal ah, oo fahmay wada hadaladooda ay la yeesheen isticmaaleyaasha Linux ee horumarsan iyo khibradda leh, taas oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee cusub. Isticmaalayaasha Linux waxay ahayd sida aan loo nadiifin is-dhexgalka isticmaalaha.
Halkaas ayuu ka dhashay mashruuca Nautilus-Elementary, oo aan waxba ka badnayn balastar ay ku jiraan xulashooyin aad u xiiso badan oo sahamiyaha faylka GNOME, kaas oo noqday mid caan ah oo ku dhammaaday dhiirrigelinta horumarka Marlin.
9 bilood oo leh OS luna hoose
Waxaan isku dayay deegaanno badan oo Linux ah iyo qaybintooda illaa 2008, iyo si daacadnimo leh markii aan adeegsanaayay eOS Luna beta1 illaa hadda oo aad u fog December 2012, waxaan si dhaqso leh u dareemay guriga.
Meel fiican, guri, saaxiibtinimo iyo dareen leh. Waxay marki hore igu noqotay distoorkeyga xusuus qorkeyga compak515 oo hada waxay ku socotaa dhamaan mashiinadeyda, desktop-kayga I7, netbook-ka saaxiibaday, dhowr kumbiyuutar PC-yada, iyo macaamiisha xiisaha leh ee Linux mararka qaar.
Iyada oo ku saleysan Ubuntu 12.04, waxay si weyn uga duwan tahay tan siyaabo badan oo ay la yaab ku tahay kuwa ka dheregsan Ubuntu distros. Marwalba waan jeclaa Debian, waan jeclahay waana jeclaan lahaa kooxda eOS inay ku dhex daraan desktop-kooda aasaaska Debian. Laakiin hadda ma doonayo inaan naftayda ka xayuubiyo isticmaalka eOS.
Laga bilaabo shaashadda boot-ka ee aasaasiga ah, waxay ahaataa mid joogto ah oo kaa yaabisa aragtida ugu horreysa. Heerkeeda sifaynta ayaa kadhigaysa mid kaduwan waxyaabaha kale ee distooriga ah. Galitaanka kal-fadhigu waa LightDM oo waxay u egtahay sidan oo kale, oo aad ugu eg Ubuntu (waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay). Xawaareheeda bilowgu waa mid dhexdhexaad ah oo isbedbeddelaya,
Aseptic, Minimalist, miiska had iyo jeer u muuqda mid wanaagsan
Ma jiraan wax ka fudud oo la isticmaali karo maanta?
Naqshadeynta isdhexgalka iyo khibrada isticmaale
Liistadu waa fududahay, waxay noo ogolaaneysaa inaan raadino codsiyada, aragno qaybaha, waxaa loogu talagalay si jiirka uu ugu yaraado safarka shaashadda, wuxuu leeyahay fikradaha caadiga ah ee adduunka ee nidaamyada hawlgalka mobilada, waxaan ka doorbidayaa menu-kii hore ee GNOME, GNOME Shell, godka laga helo Unity, ilaa Windows menu, galka codsiyada Mac ama Launchpad-kaaga casriga ah, iyo Mint Menu. Waxay qabataa shaqadeeda oo kaliya kuwa caanka ah ee loo yaqaan 'Synapse ama Gnome-Do style launchers' ayaa ku garaacay.
Luna's Dock ayaa u muuqda mid fudud, laakiin waxay kaliya masuul ka tahay hagaajinta cabbirka astaamaha si ay ugu ekaadaan shaashadda, waxay leedahay mawduucyo ku saleysan CSS taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in wax laga beddelo ama la abuuro mid cusub, aniga shakhsiyan waan dhigay gacan yar ...
Waxa kale oo ay leedahay taageerada liiska degdegga ah, baarka xamuulka, nambarka ogeysiinta, taas oo ka dhigaysa inay dareento xoog, si fiican isugu dhafan, dhammaystiran oo casriyeysan, waxaa ka maqan dariiqyada kumbuyuutarrada qaarkood Taasi waa haddii aan sameyno Alt + Tab waxaan arki karnaa inuu si fiican ugu dhex jiro nidaamka.
Geesaha kulul sidoo kale waa muuqaal wanaagsan, waxaan u isticmaali jiray macaamiishayda si aan ugu ogaado astaamo waxtar u leh shaqadooda. Sida caadiga ah waxay yimaadaan iyaga oo aan wax habayn ah laakiin waa wax aad u fudud in la helo qaabayntooda oo la jaangooyo, waxaad ka heli kartaa Dookhyada Nidaamka> Desktop
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu quruxda badan ee lagu soo kordhiyo muraayaddan ayaa ah maaraynta firfircoon ee aagagga shaqada, aad u dheecaan badan oo si fudud loo fahmi karo Waxay umuuqataa mid aniga ila siman laakiin layaab igama ahan marka lala barbardhigo Gnome Shell firfircoon. Si kastaba ha noqotee, waxay haysaa isla nuxurka eeg oo dareem nidaamka oo dhan.
Xulashada dalabka asalka ah
Marlin, ... Waxaan ula jeedaa Faylal
Halkan dhammaan eeg oo dareem ee toogashada qaro weyn ee OSx, haddii ay jiraan wax lagu amaani karo kooxda eOS waa inay iyagu hirgeliyeen tabkii markii hore, weli ma aqaano waxa "googa yar" ee qashinka geeska loogu talagalay.
Marnaba kuma dhicin inaan riixo ... Loogu talagalay adeegsadayaasha caadeystay inay isticmaalaan hal guji (taasi waa, labalaab ma gujin) waa sharaf. Si dhakhso leh u shaqeynaya, naqshad weyn, Ma aanan ogeyn inta aan jeclahay aragtida bogga, xitaa kuma aanan isticmaalin KDE.
Waxa i dhibay waa suurtagal la'aanta isku xirka server-yada dibada ama taleefankayga gacanta ee SSH sida marwalba aan sameeyo, laakiin waxaan u maleynayaa, kuwani inay lagama maarmaan u yihiin adeegsadayaasha horumarsan oo had iyo jeer waxay leedahay maamul hufan oo ka yimaada barta. Haddii kale tani waa barnaamij 10 dhibic ah. Aad ugu fiirso faahfaahinta, animations siman iyo xitaa xiiso leh. Sanduuq dhan oo yaab leh.
Browser-ka shabakadani waa mid aad u cagaaran oo aanu isticmaali karin qof garanaya Firefox, Chrome ama Opera, laga yaabee inay tahay wax waxtar u leh qof ka yimid taleefanka gacanta ama kiniin ama Internet Explorer, taas oo haddii aad ogaato inay isku dhafan tahay, maxaa yeelay dhammeystirka soo dejinta ayaa ku ogeysiineysa adiga oo isticmaalaya nidaamka desktop-ka oo ku tusaya horumarka ay ku leedahay Dock-ka, laakiin waa mid aad u liita.
Wuxuu ula jeedaa sifiican, laga yaabee in maalin un uu ku iftiimiyo iftiinkiisa. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay inay ku saleysan tahay Webkit oo ay tahay miisaan fudud, oo ku habboon mishiinnada waxqabadka hooseeya, in kasta oo aanan ogeyn haddii ay ku habboon tahay deegaankan. Laakiin si kastaba ha noqotee waligey kuma dhaleeceyn jawi ama disto loo yaqaan 'browser', Windows wuxuu leeyahay IE, OSx wuxuu leeyahay Safari, KDE Reqonk, mar walbana waxaan ku dhammeeyaa soo dejinta Firefox dhammaan nidaamyada.
Geary waa macmiil khafiif ah, markii aan idhaahdo khafiif runti waa iftiin, ma haysto taageero POP ah! Si kastaba ha noqotee, qof u adeegsada Gmail adeegiisa ay doorbidayaan ayaa sida xaqiiqada ah aad ugu faraxsanaan doona in uusan ku xirin Gmail-ka culus ee ku jira biraawsarkooda mar kasta oo ay rabaan inay hubiyaan emayl.
Waxaan ku aaminay Geary xisaabtayda Gmail-ka, way ka raaxo iyo waxtar badan tahay kana isku-dhafan tahay Mozilla Thunderbird.
Maya ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah codsiyada ugu faa iidada badan, isma waafajineyso, si wanaagsan uma daabacdo jadwalladayda, iskudhaf weyn oo intaas uun ah, qaybta ugu yar ee la safeeyey ee eOS.
Codsigeyga labaad ee aan jecelahay waa shaki la'aan Buuq (hadda waxaan u maleynayaa in loogu yeero muusig) runtii sifiican ayuu u shaqeeyaa, gebi ahaanba wuxuu ku dhexjiraa nidaamka, muusiga dhawaaqa, wuxuu leeyahay naqshad aad u wanaagsan, liisas otomaatig ah, barbaraha (wax aad dhif ugu ah Linux), waafaqsanaanta last.fm, taas oo noo ogolaaneysa inaan ogaanno maktabaddeenna la mid ah.
Iyo dhacdo ahaan, waxay kugula talineysaa mawduucyo cusub, liis garayn muuqaal ah, aragtida albumka, raadinta, marka la soo gaabiyo waxay u gudbineysaa calalka dhammaan codsiyada muusikada ku saleysan gtk.
Xoqitaanku shaki la'aan waa jacaylka eOS, marka hore waxay umuuqataa mid fudud oo cajaa'ib leh, laakiin iswaafajintiisa buuxda ee Gedit plugins iyo batteriga waxyaabaha kudhisan oo ay kamid tahay waxay kadhigeysaa jawi kuhaboon horumarka, waxna ugama hinaasin xulashooyinka lahaanshaha sida SublimeText waxaan kugula talinayaa iyada oo la adeegsanayo qalabkeeda.
Waxay sidoo kale aqoonsan tahay dhammaan luqadaha ugu caamsan ee barnaamijyada, waxaad kaydineysaa feyl hal jeer oo keliya waana la keydin doonaa sida aad wax u qoreyso, waa wax aad u fiican.
Iyo sidoo kale, deegaan kastaa wuu fiicnaan karaa ama xumaan karaa, waxaa jira dad la noolaan kara oo keliya tty, nasiib wanaag waxaan haysannaa Linux oo na siisay xorriyadda iyo aasaasiga OS moon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » eOS - Bilowga wax weyn?
Dib u eegis aad u wanaagsan. Dhowr ayaa horey u sheegay in jadwalka maahan "wax caynkaas ah", inta soo hartay eOS way shaqaysaa si weyn, wax badan ayaan ka akhriyay oo waan jeclahay qaabkeeda.
Su'aal: Waxaan hayaa Dell Latitude D600 Laptop (PIII, 40GB, 1GB ram), oo aan isku dayey inaan dib u soo nooleeyo, laakiin processor-kiisu aanu taageerin PAE, sidaa darteed: Miyaan awoodi doonaa inaan kala soo baxo ISO ee eOS si aan ugu gubo CD ma ku dhejisaa laptop-ka? (ma kaco USB) Waxaan rabaa inaan u soo nooleeyo walaalkay iga yar, wuxuu dhamaystay dugsiga sare oo waxaan rabaa inaan amaahdo inta uu mid iibsan karo. Si la yaab leh, in kasta oo uu sannado badan jiray, haddana baytarigiisu wuxuu soconayaa 3 saacadood. Inaan la rumaysan !!
Waan ogahay in halkaan aadeynin, laakiin markasta oo aan rabo inaan galo golaha, waxaan helaa "qalad 502", raaligelinteyda Elav iyo inta hartay hadii ay i dhibayso.
Ugu horreyntii waxaan kuu sheegayaa in ku saabsan ku rakibidda eOS kombuyuutarka qaababkaas, dabcan maahan. Raadi wax fudud, Xubuntu ama Lubuntu.
Ku saabsan madasha, haa, waan hoos u dhignay waana ka shaqeyneynaa. Mahadsanid.
Thanks Elav, fiirinta kaliya, waxaan imid goob ku taal G + halkaas oo qof uu isla tashaday isla markaana aysan taageero u hayn NON-PAE. Kaliya CD-ga Lubuntu 12.04 ee aan haysto ayaa la xoqay, markaa markaan isku dayay inaan rakibo, qalad ayeey bixisay. Taabo mar kale soo dejiso.
Waxaan rajeynayaa in gogosha dib ay soo noqon doonto mar dambe, anigu ma ihi xubin fir fircoon, laakiin marwalba waxaan helaa jawaabaha waxa aan raadinayo.
Madashu waa onlayn 😉
Maqaal wanaagsan, waxaan tijaabiyey eOS oo sida muuqata waxay leedahay waxyaabo wanaagsan oo u socda.
Waa Ubuntu deegaan leh (waa qolofta gnome, sax?) Waa la hagaajiyay. Wanaagsan oo hagaagsan waxaan ula jeedaa "jiidayo MAC". Waxay had iyo jeer i xasuusisaa pear OS ...
Ku jawaab zagur
Ma ahan qolofta gnome waxay leeyihiin maamul daaqad u gaar ah oo loo yaqaan gala. weli waxay haysaa waxyaabo aadan ku gaari karin adoo ku rakibaya qaahira harada gnome shell.
Isticmaal jawi desktop-ku-saleysan GNOME oo leh qolofkiisa loo yaqaan 'Pantheon'. Kaliya waan eegay. Waxaan aqriyay waqti dheer kahor cashar ku saabsan sida loo "badalo" Ubuntuada ElementaryOS 5 talaabooyin fudud ...
Runtu waxay tahay in muuqaalka eOS uu qurux badan yahay oo yar yahay. Isticmaalayaasha ku cusub rakibaadda iyo qaabeynta Linux waa nidaam weyn, sidoo kale Linux Mint.
Kuwa naga mid ah ee garanaya sida loo rakibo loona qaabeeyo si fudud, waxaa jira xulashooyin ka wanaagsan. Waxaan ku rakibaa Debian Stable qof kasta oo raba Linux maxaa yeelay muuqaal ahaan ayaa looga tagi karaa sida qofku rabo, waad u isticmaali kartaa ayeeydey ilaa NASA iyadoon dhibaatooyin dheeraad ah marna la qaabeyn oo la habeyn karin. Tan ugu muhiimsani waa hubaasha aan u siinayo qofkaas nidaam aan ku kalsoonahay oo aan siin doonin qaladaad aan laga fileynin guud ahaan, iyo xasiloonida oo ay weheliso muuqaalka waxaan filayaa inay yihiin labada arrimood ee ugu muhiimsan qofkasta inuu bilaabo la qabsiga isticmaalka Linux.
Sikastaba, waxaan rajeynayaa in eOS ay ku dhiirigalin doonto dad badan inay adeegsadaan softiweer bilaash ah.
Salaan, waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Muuqaal xiiso leh oo xiiso leh (halkii, boostada aad igu iibsatay, haha).
Anigu waxaan ahay isticmaale Linux Mint ah illaa iyo markii Ubuntu madaxiisa ku dhegtay (dib ugu soo laabtay 10.10) oo waxaan kaliya arki doonaa inaan cusbooneysiiyo OS-ga (Waxaan filayay wax soo saarka Mint 15 oo leh XFCE laakiin waan dhigay taleefanka oo wali waan sii joogaa ' t rakibay). Waxaan u maleynayaa inaan ku siin doono wax yar tijaabinta PC-gaaga ka hor inta aan rakibin Mint15 ama aan si toos ah ugu rakibo buuga xusuusta leh ee wali haysta Ubuntu 10.04 hore.
Maqaal aad u wanaagsan, aad u dhameystiran.
Waan isku dayay aadna waan uga helay !!! In kasta oo hadda aan ku dhegannahay Ubuntu.
Faylasha Pantheon ma lahan isdhexgalka Insynch ama kuma xirnaado serverka (sida ku xusan qodobka).
Uma lihi USB kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutar ah sidaa darteed ma aanan awoodin inaan tijaabiyo xiriirka eOS - Android USB.
Waxa aanan helin waa halka ay doorbidayaan Faylasha. Fikrado kasta?
Waxaan u maleynayaa waxa aad raadineyso inay ku jiraan ppa waxaana loogu yeeraa tweak aasaasi ah.
Hore ayaan u rakibay laakiin waxba kamaan arkin meeshaas.
Barafka Barafka dijo
Waxay ku jirtaa dookhyada nidaamka
Ku jawaab SnowLion
OK aad baad u mahadsantahay !!
Markii aan dib u cusbooneysiin karo oo aan eegi karo. Maxaa ku saabsan Insynch? Waan isku dayay laakiin aniga iima shaqeyn ...
Faallooyinka ku saabsan eOS… dib u eegista ku saabsan eOS meel kasta.
ka Linux wuxuu noqon karaa wax ka yar ...
Waa salaaman tahay, waxaan si farxad leh ula yaabay eOS, waan rakibay laakiin waan niyad jabay
Hmm, layaab raaxo leh laakiin waan kaa niyad jabay? Ma fahmin…
Waxaad ka fahmi doontaa hoosta, sibiibix Gal kahor intaadan dhammeyn, salaan.
Waxaan rakibay eOS toddobaad ka hor. Waxbaan jeclaaday! Waxaa macquul ah in waxyaabaha qaar ay maqan yihiin laakiin waxa aan u isticmaalo buugaagta xusuus qorku waa qumman yihiin. Aad u dhakhso badan, bilic ahaan kaamil ah oo aadna loo qaabeyn karo.
Anigana waa iga!
Waa salaaman tahay, waxaan si farxad leh ula yaabay eOS, waan rakibay laakiin waan ka xumahay inay ku salaysnaato Ubuntu XX, kernel 3.2; Waxaan u ogolaanayaa naftayda inaan ku riyoodo deegaankan PCBSD, waayo? Kernel FreeBSD, sii deynta wareejinta, nidaamka faylasha ee ZFS, jeelasha, rukhsadaha BSD, iwm. iwm Waxaan ka isticmaalaayay Linux in kabadan sanad (xiise) Windows, oo aanan usoo laaban doonin, hadafkeyguna waa inaan gaaro PCBSD, si fudud ayaan ujeclahay.
Dhinaca kale, in badan ayaa looga hadlay eOS in aysan lahayn badhan yareyn, kama faalloon karo waqti la'aan darteed, laakiin waxay umuuqataa mid sax ah inaysan soo bandhigin badhanka yareynta, waayo? maxaa yeelay waa shay kale, waxaan qiyaasayaa OSX, maxaa yeelay haddii qofku dhaqaajiyo shaqada aragtida daaqadaha oo dhan adigoo jiirka u dhaqaaqaya tusaale ahaan. Dhinaca bidix, waxaad ku arki doontaa dhammaantood, xiiso, haddaba maxaad ugu baahan tahay inaad sameyso dadaal inaad ku garaacdo barxad yar si aad u yareyso haddii dhaqdhaqaaq indho la'aan ah oo gees ah aad si macquul ah u haysato.
Ma aqaan dhinacyada farsamada laakiin waxay ila tahay aniga inay khaldan tahay waxay noqon laheyd jawi desktop ah. dhammaan Linux iyo bsd, sax?
Dhab ahaan, waa u qalantaa riyo, laakiin iyagu way qaybiyeen.
Waad salaaman tihiin, tweaks-ka aasaasiga ah wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ku dhajin karto badhamada yareeya, ama aad beddesho, sidoo kale ku dabaq mawduucyada iyo faahfaahinta kale, oo ku saabsan kernel, waxaa lagu cusbooneysiiyaa 3 tallaabo oo sahlan, waxaan haystaa 3.11
iyo geeska firfircoon waa mid aad u fiican, sidoo kale muujinta daaqadaha furan iyo miisaska
LibreOffice 4.1, Clementine, Gimp, Inkscape, Google Chrome, Pidgin, Thunderbird, VLC, VirtualBox, TeamViewer, Text Sublime, gedit, MIXX, OpenShot, Conky, CoverGlobus, Ocenaudio, SkyPE
Waxaan u maleynayaa wax la mid ah marcelo waxaan u maleynayaa inaan jeclaaday aasaasiga mar hore ayaan aqriyay oo aan ku rakibay pc-ga si aad u wanaagsan ayuu u socdaa. Waan sii wadi doonaa isku dayga ilaa aan caajiso ...
Dib-u-eegis aad u wanaagsan, waxay umuuqataa in eOS ay kicineyso damacyo. Jidka aan u malaynayo in "qashin-qubka" ay tahay fikrad ah in lagu soo celiyo tabskii xirnaa, waxaa jira biraawsar leh astaamahaas laakiin ma xasuusto midka.
Hadday sidan tahay sidaad u leedahay waa wax aad u wanaagsan oo aanan aqoon.
Waa inay ku koobnaadaan horumarka deegaankooda, haddii kale waa wax la bixin karo.
Waa inaan isku dayaa distoorkan, habka ugu fiican ee blogga iyo salaanta ka socota Mexico ilaa elav iyo shirkad (kan ay ugu yeeraan bacaad).
Gacaliye: waa Linux-ka kaliya ee aan ku maamuli karo Lenovo G580-ka cusub. Mid kale oo socdaa ma jiro. Isku day dhowr oo dhammaantood waxay bixiyaan shaashadda madow. Qofba fikrad buu qabaa waayo? Waan jeclahay eOs anyway.
Sii xasilooni dheeri ah nidaamka waana la dhameeyay.
Ku jawaab Fliipen
Mar labaad waad salaaman tihiin, waxaan ahay Marcelo hada oo aan isdiiwaangaliyay. Waan ogahay in faalintaydu halkaan aadeynin laakiin xoogaa shaqo ayaa iga buuxda waxaana u baahanahay jawaab deg deg ah. Xagee ku joojiyaa labada guji ee tilmaamaha eOs? Meel walba waan ka raadiyey mana aanan helin! Dabcan, waxaan jeclahay daqiiqad kasta oo dheeri ah 🙂
Ku jawaab Olecram Onaroval
Taas awgeed waa inaad ku rakibtaa isku-dhejiska aasaasiga ah. Halkan ayaan ku muujinayaa sida loo sameeyo.
Kun jeer baan maray oo maan arag. Aad baad u mahadsan tahay, elav!
Waan rakibi lahaa, laakiin rakibida java oracle jdk kharash badan ayaa ku baxa, pacman waxay la mid yihiin 3 amar. Suugaan ahaan waa sababta aanan ugu rakibin haha
Waan jeclaa Dugsiga Hoose, dhibaatada kaliya ee i haysay waxay ahayd inaan awoodi waayo inaan isticmaalo FLASH si aan u daawado fiidiyowyada youtube midkoodna Midori, ama Chronium ama Firefox.
Laakiin haddii la xalliyo waxaan ku dhegi doonaa 'distro'.
Waad wareegsan kartaa http://www.elementaryupdate.com/
Waxaa jira macluumaad badan iyo waliba tilmaamo si loo habeeyo.
Hada waxaan joogaa elementaryOS Luna (hada rakibtay) waxa ugu horeeya ee aan sameeyayna waxay ahayd iskuday flashka aragtidaada awgeed ...
Waxaan ogaaday in flash uusan la imaanaynin distro-ga, laakiin dhib kuma qabin inaan rakibo Firefox ka dibna Flash oo laga helo Xarunta Software-ka. Waxaan isku dayay inaan ciyaaro qaar ka mid ah fiidiyowyada youtube iyo wax walba oo qumman 🙂
Ma ka raadin kartaa feylasha furaha sida midnimada iyo noocyada ugu dambeeya ee gnome 3?
Ku jawaab Holico
"Qashinka qashinka ee geeska" waxaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo tabskii ugu dambeeyay ee la xiray.
Adoo yeelanaya, tusaale ahaan, «Sawirro» iyo «/ usr / share / icons /» laba tab oo kala duwan oo la xirayo (aan si kama 'ah u dhahno) tan labaad, astaanta (tan yar ee qashinka ama qashinka geeska) ayaa mugdi sii galaysa oo markaan riixno waxay umuuqdaan tabkii udambeeyay oo xirmay isla markaana guji fudud ayaa kusoocelinaya midka aan rabno inaan dib ufurno ... Shaqada ayaa ah mid aad waxtar u leh.
Jawaab Alan Bismarck
Waxay u shaqeysaa oo keliya raadinta barnaamijyada, in kasta oo tan tan la xallinayo aad ku darto "Tusiyaha-isweydaarsiga" eOS iyo voila, waxaad ku raadin kartaa barnaamijyada iyo faylasha magacooda.
boqorka 690 dijo
Dib u eegis aad u wanaagsan, si fiican u dhig cinwaanka .. Shaki la'aan waxay noqon kartaa bilowga wax weyn, sababtaas darteedna aad uma eedeyn kartid wax badan. Maxaa yeelay waa uun BILAASH.
Waxaan rajeyneynaa in cilladaha iyo / ama cilladaha dugsiga hoose kajira ay yihiin maxaa yeelay wali waa deegaan da 'yar, inay dhagaystaan ​​adeegsadayaasha oo ay ku quudiyaan, wayna qaban doonaan heer sare.
Aniga dhankeyga, waxa aadka ii dhibay ama i tabay waa aag ay ku soo bandhigaan aaladaha la fuulo oo ay weheliso feejignaanta u gaarka ah marka qalabka la gelinayo.
Hadeysan taasi aheyn, waxaan fursad u siin lahaa jahwareerkaan quruxda badan, waa inaan sugnaa hadda.
Ku jawaab eze690
Waxay u noqon kartaa bilow inay horumariyayaashu qaybiyaan Linux inay xoogaa dadaal ah muujiyaan, maxaa yeelay waa inaan aqbalnaa in Linux ay tahay wax dabiici ah oo dabiici ah, haa waa run way fiicnaan kartaa, laakiin waxaan u baahanahay inaan gacan ku dhigno, si aan wax u qabanno in adeegsade u imanaya Linux markii ugu horeysay uu u arko mid aad u adag. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko farshaxan ka fiican Xfce, Lxde, Gnome Shell iyo KDE, maxaa yeelay aan wajahno, kuma sii jirno 90-ka mar dambe. Waxaan rajeynayaa inaanan ku dhaawicin qofna dareenkeyga ra'yigeyga, sidoo kale waxaan guriga ku isticmaalaa Debian Xfce iyo Arch KDE laakiin waan aqoonsanahay waxyaabaha aan ku horumarin karno.
Waad jeclaan kartaa ama ma jeclaan karto, laakiin waa inaad aqoonsataa shaqada ay qabanayaan. Waxaan sidoo kale u maleynayaa inuu ku saleysnaan lahaa debian (xitaa haddii ay ahaan laheyd imtixaanka). Waxaan fiirinayay bogga maalmo badan waxayna sameenayaan heeso qurux badan waxa ugu fiicanna waa inaad awood u yeelato inaad kala soo baxdo oo aad ku dari karto wixii jira. Waan isku dayay laakiin wali way cagaaran tahay, qolofka gnome-ka ahna waan la qabsan kari waayey. Waan hubaa inay kumbuyuutarkaas ku haysan karaan xfce ama muusikada meeriska ah oo aan u dhigno loox dock ah. !!
Uma maleynayo inay tahay mid kale oo ku tiirsan ubuntu, laakiin waxaan u maleynayaa in haddii ay sidan ku sii socdaan, ay keeni doonto dad badan oo adeegsada Windows ah oo doonaya naqshad qurux badan (sida macosx) iyo shaqeynta. Iyo sida hordhac kale u yiraahdo waqti ilaa waqti
Waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso PearOS. Waxay la socotaa isla fikradda laakiin waxay leedahay wax badan oo la bixiyo.
nidaamka madow dijo
nstale elemenatryosluna iyo dib u bilaabida subaxda xigta ayaa helay fariinta.
elementaryosluna desingblacksystem-system-product-Magaca soo gal:
ii oggolaan maayo inaan adeegsado nidaamka
ma ii sameyn laheyd nimcada weyn ee iga caawinta wanaagsan.
Ku jawaab desingblacksystem
Hello SnowLion, oo ka socda La Banda-Sgo del Estero, waxaan kaa hinaasayaa meesha aad wax ku qorto, gaar ahaan marka halkan aan joogno hooska 45/48 °. Waan kugu faraxsanahay!. Waad ogtahay inaan soo dajiyay labada nooc ee eOS 32 / 64bits iyo kadib markaan gubayay DVD-Rw ee tijaabooyinka -Waxaan horay usameeyay Xubuntu, Mint, PCLinuxOS-, iyo markii ladhacayo, waxay timaadaa miiska hore kahor muuqaal muuqaal ah oo ah dhul dhagax ah oo badda agteeda aad u wanaagsan, ka dibna desktop-ka iyo baraf-mararka qaar xitaa jiirka-, shaashad cad iyo khad madow oo keliya ayaa kor lagu arkay oo leh qaar ka mid ah pixels dhibco midab leh iyo wax kale; Markii aan arko qabashadaada waxaan gartay inay tahay baarka leh marinnada la muujiyo. Xalka kaliya ayaa ah in kombiyuutarka laga xiro badhanka shidida iyo deminta oo markale dib loo bilaabo; illaa iyo hadda eber-eOS. Waxaan haystaa AMD Athlon X2 3.5 4GB RAM video nVidia GF-9400GT 500Mb aniga ah oo aniga iska leh sidaa darteed uma baahna isku xirnaanta…, waxaan qabaa. Ma jiraa wax xal ah? Waxaan cadeynayaa inaan ahay cusub oo kaliya xamaasad iyo geesinimo labadaba Windows iyo Linux, marka waxaan rajeynayaa caawintaada kafeega inuu marayo. Hug.
Ku jawaab Chipaquero
SolusOS 2 Alpha8: ugu horreyntii ISO ee loogu talagalay horumariyeyaasha iyo tijaabiyeyaasha